Farmaajo Oo War Kasoo Saaray Madaafiicdii Lagu Garaacay Xarunta Villa Hargeysa | dayniiile.com
Home WARKII Farmaajo Oo War Kasoo Saaray Madaafiicdii Lagu Garaacay Xarunta Villa Hargeysa
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Alle ha u naxariistee, Abwaan Beddel Jaamac Xirsi oo dil xaqdarro ah loogu gaystay magaalada Muqdisho.
Alle ha u naxariistee Marxuum Beddel Jaamac Xirsi waxaa uu ahaa haldoor, abwaan iyo nabaddoon bulshada ka wacyi gelin jirey aafada qabyaaladda, kalatagga iyo aayo-xumada colaadaha, waxaana uu mar walba ku baraarujin jirey taageerada dowladnimada, midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed. Waxaan xanuunka tacsida la qaybsanayaa ehelka Marxuumka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed.”
Sidoo kale, Madaxweyne Farmaajo ayaa cambaareeyey weerarkii maanta lagu beegsadeen Xarunta Villa Hargeysa, isaga oo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in meel looga soo wada jeesto ficillada Al-Shabaab, si buuxdana loola shaqeeyo ciidammadeenna geesiyaasha ah ee har iyo habeen u taagan sugidda amniga dalka.
Previous articleDhimasho & dhaawac ka dhashay qarax ka dhacay duleedka Muqdisho
Next articleAl-shabaab oo sheegatay Khasaare ka dhashay Hoobiyeyaal lagu weeraray xarunta Villa Hargeysa
Ciidanka dowladda oo dagaal kula wareegay degaanka Sangooye